महामारी नियन्त्रणमा हामी तुलनात्मक रुपमा सफल छौँ । : रिजाल - खवर संजाल
महामारी नियन्त्रणमा हामी तुलनात्मक रुपमा सफल छौँ । : रिजाल
- जेष्ठ ३, २०७८ मा प्रकाशित
विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोविड १९ को महामारी गाउँगाउँ सम्म पुगेको छ । सञ्चार माध्यम यसैले भरिएका छन् । मान्छेहरुमा त्रास फैलिरहेको छ । यहि सन्दर्भमा खोटाङ को दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले यसको नियन्त्रणमा कसरी भूमिका खेलिरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा हामीले नगरपालिकाका मेयर दिपनारायण रिजालसँग कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ खबरसञ्जालसँग मेयर रिजालको कुराकानी :
दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले र व्यक्तिगत रुपमा तपाईंले पनि यो महामारीलाई कुन रुपमा लिनुभएको छ ?
वास्तवमा यो महामारी अघिल्लो सालकोभन्दा जनजिवनलाई अत्यन्तै प्रभाव पार्ने र जटिल किसिमको छ । यसले ठुलो संख्यामा मानव क्षति समेत निम्त्याईसकेको हुँदा यसलाई अत्यन्तै संवेदनशीलरुपमा हामीले लिएका छौँ । यसको नियन्त्रणका लागी गर्न सक्ने म्याक्सिमम् कोसिस नगरपालिकाले गरिरहेको छ । यसको नियन्त्रण र समाधानका लागी हामी कुनै कसर बाकीँ राख्ने पक्षमा छैनौँ । यो महामारी शुरु हुँदैदेखी हामीले बजार लगायतका भिडभाड हुने क्षेत्रलाई बन्द गर्यौं जसले गर्दा यो धेरै फैलिन पाएन । व्यक्तिगत रुपमा मैैले पनि एकदमै सचेतता अपनाएँ, अत्यन्तै आवश्यक काम नपर्दा सम्म बाहिर ननिस्कीने, सकेसम्म भर्चुअल रुपमा कामहरु गर्ने जस्ता उपायहरु अपनाएँ । हामीले अरुलाई पनि यसकालागि पहल गर्यौँ । यो मानेमा हाम्रो नगरपालिका यो महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा तुलनात्मक रुपमा सफल नै छ ।
नगरपालिका भित्रका संक्रमितहरुको अवस्था कस्तो छ ?
हालसम्म नगरपालिका भित्र ५२ जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ । जसमध्ये ६ जना ठिक भईसक्नुभयो । उपचारका लागि २ जनालाई काठमाण्डौ र १ जनालाई बिराटनगर पठाएका छौँ । उहाँहरुको अवस्थामा पनि सुधार भईरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ । बाँकी संक्रमितहरु होम आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, सामान्य ज्वरो, खोकी जस्ता लक्षण देखिएपनि स्वासप्रस्वासमै समस्या आएको चाहीँ अरु केस छैनन् ।
तपाईंहरु चढ्ने गरेको सवारीसाधन एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग भईरहेको भन्ने समाचारहरु आईरहेका छन्, यसकोबारेमा भनिदिनुस् न ।
यो महामारी यसरी फैलिरहँदा हामीसँग भएको एम्बुलेन्स अपर्याप्त हुने अवस्था सृजना भयो, संक्रमितहरुलाई जिल्ला बाहिर उपचारका लागि लैजाने, स्वाव परीक्षणका लागि लैजाने, अन्य विरामीहरुलाई अस्पतालसम्म लैजाने काममा समस्या आउनसक्ने अवस्था सृजना हुँदैगएपछि हामीले म र उपप्रमुख विणादेवी राई चढ्दै आएका दुईवटा गाडीलाई पनि एम्बुलेन्सको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छौँ । गाडीको भित्र विरामीमैत्री हुनेगरी व्यवस्थापन गरेर यी गाडीहरु प्रयोग भईरहेका छन् । मेरो गाडीले अस्तिको दिन कोविडको एकजना संक्रमितलाई विराटनगर पुर्यायो र हिजो आयो लगत्तै आज १९३ जनाको स्वाव लिएर गयो । उपप्रमुख चढ्ने गाडीले हिजो एकजना संक्रमित र हामीले संकलन गरेको ८ ओटा खाली सिलिण्डरहरु लिएर काठमाण्डौ गयो र आज ती सिलिण्डरहरुमा भरी अक्सिजन लिएर दिक्तेल आईपुग्छ । यसरी अब यो महामारी भरी हामी चढ्ने गरेका गाडीमा बिरामीहरु चढ्नेछन् ।
अघिल्लो लकडाउनमा देखिएको एउटा महत्वपूर्ण दृष्य थियो, राहत वितरणको । यसपाली राहत वितरणको लागि के सोच्नुभएको छ ?
यसपाली हामीले सकेसम्म राहत वितरण नगर्ने सोच बनाएका छौँ । पोहोर हामीले विकास निर्माणका कामहरु रोक्यौं जसकारण धेरैजनाले काम गरेर छाक टार्न पाएनन् तर यसपाली हामीले सुरक्षा उपाय अपनाएर ती कामहरु जारी राखेका छौँ । नगरपालिकाभित्र कोही मान्छेले खानै नपाउने स्थिती बन्यो भने त नगरपालिकाले जुनसुकै बेला पनि उसलाई सहयोग गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन तर अघिल्ला सालहरुमा जस्तो राहत वितरणको काम चाहिँ सकेसम्म नगर्ने सोच बनाएका छौँ ।
नगरपालिकाले आफ्नो सेवाप्रवाह कसरी गरिरहेको छ ?
हामीले अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु प्रवाह गरेका छैनौँ । कार्यालयमा कार्यरतमध्ये एक तिहाई कर्मचारीहरुले अत्यावश्यक सेवाप्रवाह गरिरहनु भएकै छ ।
अन्त्यमा, नगरबासीहरुलाई के सन्देश दिन चाहानुहुन्छ ?
हामी अत्यन्तै कठिन समयमा उभिएका छौँ । आफै या आफन्तहरुलाई संक्रमण नहुँदासम्म धेरैलाई यो रोग सामान्य नै लाग्न सक्छ तर यसलाई कसैले पनि सामान्य रुपमा नलिन अनुरोध गर्दछु । साथै नगरपालिकाले जारी गरेका सबै निर्देशनहरुलाई पालना गर्न म अपिल गर्न चाहान्छु । र आफ्नो ठाउँबाट यसको नियन्त्रणकालागि कुनै कसर नराख्ने कुरामा विस्वस्त गराउन चाहान्छु ।